XOG XASAASI AH: DF Somaliya oo Wafdi u dirtay Puntland si loo xaliyo khilaafka xoogeystay ee ka dhex taagan! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG XASAASI AH: DF Somaliya oo Wafdi u dirtay Puntland si loo...
XOG XASAASI AH: DF Somaliya oo Wafdi u dirtay Puntland si loo xaliyo khilaafka xoogeystay ee ka dhex taagan!
Boosaaso (Halqaran.com) – Wararka ka imaanaya Magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa waxa ay sheegayaan, in Wafti ka socda dowladda Federaalka oo ay ka mid yihiin xubno ka tirsan Golaha Wasiirada maanta ay gaareen Magaaladaasi.
Wafdigan ayaa u tagay Magaalada Boosaaso dhammeynta Khilaafka ka dhex taagan dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland oo gaaray heer aysan kasoo qeyb galin Shirarka dowladda.
Waftigaan ka socda Federaalka oo dhammaantood Puntland ka soo jeeda ayaa kulan la leh Madaxweyne Saciid Deni si ay uga dhaadhiciyaan la shaqeynta dowladda dhexe ee Soomaaliya.
Madaxweyne Dani ayaa ku shaqeynaayay maalmihii ugu dambeeyay Magaalada Boosaaso.
kulan la leh madaxweyne Deni
Wafdi ka socda dowladda